टिका जैसीको नृत्यमा झुमेको पश्चिम नेपाल – Rajmarg Online
मोडेल टिका ‘छोरीको वेदना’ले धेरै दर्शकहरुलाई रुवायो ।
त्यो महोत्सव के महोत्सव ? जहाँ टिका जैसीको नृत्य छैन । सुन्दर अनुहार, हल्का मोटो शरिर, नृत्यका सम्पुर्ण तरिकाहरु अपनाउने टिका जैसी दाङका लागि नयाँ नाम भने हैन । उच्छृङखल भन्दा अलि शालिन र सभ्य नृत्यका लागि चर्चित टिका आफैमा भद्र, जिज्ञासु र सधैव सिक्ने र सिकाउने विषयमा चासो राख्ने मोडल हुन् ।
दाङमा जति पनि महोत्स चलेका छन्, मेला चलेका छन्, त्यहाँ टिका जैसीको नृत्य चलेको छ । पछिल्लो पुस्ताको सफल र कुशल नृत्याङ्गनाको रुपमा परिचित टिका जैसी महोत्सवमा मात्र हैन, सयौँ म्युजिक भिडियोहरुमा समेत आफ्नो कला प्रस्तुत गरिसकेको मोडल हुन् । म्युजिक भिडियोका लागि नेपाली बजारका चर्चित अनुहारसँग काम गरीसकेकी टिकालाई अझै धेरै काम गर्न मन छ, सिक्न मन छ । ‘भनिन्छ, सिकाईको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन, हुन त मैले औपचारिक रुपमा त्यस्तो नृत्यका कुनै पनि कक्षाहरु लिएको छैन तर आफुलाई खार्ने, नयाँ कुराहरुको प्रयोग गर्ने विषयमा सधै उत्सुक नै हुन्छु ।’ मोडल जैसीले भन्छिन्, ‘काम गर्दै जाँदा धेरै कुराहरु सिक्ने अवसर पनि मिल्दो रहेछ ।’
प्रदेश नं. पाँचको पश्चिममा पर्ने जिल्ला बर्दिया । बर्दियामा जन्मिएकी टिका अहिले कलाकारिताको क्षेत्रमा काम गर्ने उदेश्य सहित काठमाण्डौमा छिन् । कर्मथलोको रुपमा काठमाण्डौमा रहँदै आएकी टिका काठमाण्डौमा भने कम बस्नु पर्छ । किनकी देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा मेला महोत्सव भैरहन्छन्, अहिले टिकाको माग पनि धेरै छ, त्यस अनुसार दर्शकहरुको विचमा पुगेर टिकालाई नृत्य प्रस्तुत गर्ने कार्य बढ्दो अवस्थामा छ । टिकाले भन्छिन्, ‘मेला महोत्सवमा गईएन भने हाम्रो आम्दानी समस्यामा पर्छ, अहिलेका कलाकारहरुलाई बाँच्ने बाटो, कमाउने बाटो भनेकै मेला महोत्सवहरु हुन् ।’ उनि भन्छिन्, ‘चलचित्र, म्युजिक भिडियोको स्क्रिनमा मात्र देख्ने अनुहार अहिले मेला महोत्सवको सन्दर्भमा दर्शकहरुकै विचमा पुग्न पाईन्छ, यो आफैमा हामी कलाकारहरुको लागि खुशीको कुरा हो ।’
टिका जैशी नेपालको मध्यपश्चिम, सुदुर पश्चिमको छोरी हुन् । त्यहि अनुरुप सबै भन्दा धेरै पश्चिम नेपालमै उनको माग रहेको जैसी बनाउछिन् । ‘पुर्व तिर नजाने भन्ने हैन, नबोलाउने पनि हैन, तर पश्चिम नेपालमा मलाई जतिले माया गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार पुर्वमा छैन, तर वर्षमा केहि दिन म पुर्व नेपाल तिरै हुन्छु, विभिन्न कार्यक्रमका लागि ।’ २०७० सालतिर मात्रै काठमाण्डौ छिरेकी हुन् टिका जैसी । अहिलेको चर्चित गायीका पुर्णकला विसी टिकाको फुपु पर्छिन् । तिनै पुर्णकलाको साथ, सहयोग र अभिभावकत्वका कारण आफुले अहिलेसम्म काम गर्न सकेको, चर्चामा आउन सकेको टिकाले बताईन् । ‘पुर्णकला फुपु नभएको भए म अहिले यो स्थानमा हुने नै थिईन, त्यसको लागि मैले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यबाद र आभार प्रकट गर्नुपर्छ ।’
टिकाले पहिलो पटक म्युजिक भिडियो गरेको गीत हो पशुपति शर्माको शब्द, लय र स्वरमा रहेको हात लाग्यो सुन्य । त्यो गीतमा महिला आवाज पुर्णकला विसीकै रहेको छ । पहिलो पटक म्युजिक भिडियोमा चर्चित मोडल शंकर विसीसँग उनले मोडलिङ गरिन् । त्यसले उनलाई पहिलो चरणमै चर्चित बनायो । ‘पशुपति शर्माको गीतमा धेरैले मोडलिङ गर्न खोज्छन्, मैले पहिलो म्युजिक भिडियो नै पशुपति शर्माको गीतमा गर्ने अबसर पाए, त्यो गीतले मलाई एकै पटकमा माथि उठायो ।’ टिकाले भनिन्, ‘त्यसपछि मेला धेरै गीतहरु बजारमा आए, एक पछि अर्को गीतले मलाई यहाँ सम्म पु¥याउन सफल भएका छन् ।’
टिका अहिलेसम्म तीन सय भन्दा बढि गीतहरुमा मोडलिङ गरिसकेकी छिन् । आधुनिक, लोकगीतहरुमा टिकाको अभिनय देख्न सकिन्छ । ‘मैले अभिनय गरेका, नृत्य गरेका सबै गीत मेला लागि महत्वपुर्ण हुन् । सबै गीतहरुमा मैले राम्रो गर्ने कोसिस गरेको छु ।’ टिकाले भनिन्, ‘त्यस अनुसारको दर्शकहरुबाट माया र साथ पाएकोमा खुशी लागेको छ ।’
टिकाले अभिनय गरेका गीतहरु मध्य एउटा गीतको यहाँ चर्चा गर्नै पर्छ । मोडेल टिका ‘छोरीको वेदना’ले धेरै दर्शकहरुलाई रुवायो । गीतलोक गायिका पूर्णकला बिसिको मर्मस्पसी आवाजमा रहेको यो गीत गीतकार शिव हमालको शब्द रचना साथै संगीत भरेका छन् । मारुनी स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएर बजारमा आएको सोही गीत बिश्वाश नेपालको एरेन्ज साथै कुमार रानाले मिक्सिङ गरेका हुन् । भिडियोमा मोडेल टिका जैसीलगायत उनका सबै परिवार जन्म दिने आमा, बुवा, हजुर बुवा, हजुर आमा र भाई बहिनीहरुको सामुहिक रुपका अभिनय रहेको छ । बर्दियामा जन्मिएकी मोडेल जैसी कलाकारिताको लागि राजधानी छिरेको केहि समय पछि उनले यो गीत बजारमा ल्याएकी हुन् ।
छोरी भएर जन्मिएपछि बुवा आमालाई आफुले सोंचेको जस्तो खुशी दिन नसकेको यथार्थ दुखका वेदना तथा मौलिक बिषयवस्तुमा आधारित शब्द उक्त गीत ‘छोरीको वेदना’ मा समावेश गरिएको टिका जैसीको दाबी छ । उनि पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोको अभिनयमा व्यस्तता देखिँदै आएकी छिन । भोलिका दिनहरुमा पनि लोक तथा आधुनिक गीतहरुमा अझै राम्रो काम गर्दै जाने योजना रहेको टिकाले बताईन् ।
नेपाली नृत्य र संगीतमा केहि काम गर्न खोजेको टिकाले बताईन् । सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै टिकाले नेपाली लोक संगीत क्षेत्रको मौलिक नृत्यको संरक्षण र प्रचारप्रसारमा काम गर्न पाउँदा निक्कै खुशी लागेको भनाई छ । ‘नेपालमा मात्र हैन, देश विदेशमा समेत नेपालको कला, संस्कृतिको प्रचारप्रसारका लागि जाने योजना छ । नेपाल बाहिर रहनु भएका दाजुभाई दिदिबहिनीहरुले बोलाई रहनु भएको छ ।’ टिकाले भनिन्, ‘मोडलिङ क्षेत्र निक्कै गाह्रो कुरा पनि हो, प्रतिस्पर्धा पनि छ, तर सबैले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने हो भने राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।’